Ampitomboina ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny tanjon'ny mpitsidika
Fiovam-po: Mihaona amin'ny tanjon'ny mpitsidika anao
Alatsinainy Janoary 31, 2011 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Mety ho toa fanontaniana miharihary izany, saingy rehefa noforonina ny tranokalanao hamaly ny tanjon'ny karazana mpitsidika tsirairay dia azonao atao ny mamadika bebe kokoa. Ho tonga amin'ny tranokalanao ireo mpitsidika noho ny antony maro:
Mitady fampahalalana - mety samy mitady valiny manokana ny mpanjifa sy ny vinavina. Afaka mahita azy ireo ve izy ireo? Raha tsy izany, afaka mifandray aminao ve izy ireo hahitanao ny valiny?
Discover - imbetsaka ny mpitsidika no hipetraka amin'ny tranokalanao na bilaoginao satria nahita anao izy ireo. Mampiroborobo ny tranokalanao amin'ny toerana nitrangan'izany fahitana izany ve ianao?
Fahefana manorina - hiverina ireo mpitsidika manontany tena raha tena ianao na tsia ny fahefana ao amin'ity orinasa ity. Inona no ataonao hanaporofoana izany?
Mahazo fitokisana - ny mpitsidika koa dia mety tsy hiova fo aminao mandra-pahafantany fa mendri-pitokisana ianao. Inona ny mangarahara, ny fifandraisana ary ny tamba-jotra no ampirisihinao?
famahanana - ny fikolokoloana dia mitaky ireo voalaza etsy ambony rehetra ireo fa mamela ireo mpitsidika hiova fo amin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo amin'ny fanampianao. Manana programa azonao zahana ve ny mpitsidika?
Ny fiovam-ponao dia tsy mitranga amin'ny an atao anaty harona bokotra! Ny fitondran-tena mpitsidika an-tserasera dia sarotra kokoa ary mitaky lalana maro hafa amin'ny alàlan'ny tranokalanao mankany amin'ny fiovam-po. Mba hitrandrahana tanteraka ny tranonkalanao dia tokony hampiroborobo ny tranokalanao izay hahitana valiny (amin'ny alàlan'ny motera fikarohana), amidy ny tranokalanao izay hahitana azy (Indostria amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny besinimaro sy ny tambajotra sosialy), tsy maintsy manangana fahefana (amin'ny alàlan'ny demos, whitepapers, fitorahana bilaogy ary horonan-tsary), ary manome làlana mahavelona mankany amin'ny fiovam-po (mailaka na antso an-tariby).
Tags: Fanamarinana ny marika